Wedzera hupenyu hweye SD flash memory pane iyo Raspberry Pi | Linux Vakapindwa muropa
Raspbery Pi: wedzera hupenyu hweiyo SD kadhi
Sezvatinoziva, Flash memory vane hupenyu hwakaganhurirwa, sezvavanodzikira nedata vanonyora mushure mezviuru zvishoma Pamwechete, pakushandisa zvakajairwa izvi hazvifanirwe kuratidza dambudziko hombe, asi kana tikashandisa zvakanyanya SD, zvinogona kukonzera matambudziko (kunyanya kana tiri kushandisa Raspi sevhavha).
Saka isu tinogona kuwedzera hupenyu hwekadhi redu reS SD mune Raspberry Pi uye zvese nekuda kweLinux. Chinangwa ndechekuderedza huwandu hwekunyora pane yedu SD kadhi kuti pamper zvimwe ndangariro uye kuti zvikanganiso hazvioneke nekukurumidza kudaro.
Kune izvi pane mamwe maitiro akanaka atinofanirwa kuita, sekushandisa SD mune yekuverenga-chete maitiro, sekunge iri LiveCD. Imwe sarudzo yaizove yekudzora huwandu hwekunyora kunoitwa SD yekutenda kune RAM.
Izvi zvingaitwa sei? Zvakanaka nechombo tmpfs. Kuti kernel inyore ku RAM pese pazvinogoneka uye nekudzivirira zvisina basa SD inonyora, isu tinofanirwa kushandura iyo / etc / fstab faira. Kune izvi isu tinowedzera mutsara:
El kernel iwe unozogona kukwira / var / log mu RAM uye woishandisa kunyora ipapo kudzivirira izvi zvinyore zvaizoenda SD. Kana iyo data isingadiwe, iyo RAM inoshandiswa ichaburitswa. Saka chete iyo inodiwa RAM ndiyo inoshandiswa uye nemazvo.
Sekuona kwedu, mumutsetse tashandisa "size = 100m" kuitira kuti 100MB ishandiswe, asi iwe unogona kugadzirisa saizi kwaunoda, uchigara uchichenjerera kuti usapedza zvese RAM. Isu takashandisawo / var / log, asi kune mamwe mafaera uko kernel inowanzo nyora vazhinji, saka tinogona kuwedzera mimwe mitsara senge yapfuura asi nemamwe mafaira akadai: / tmp, / var / tmp, / var / kumhanya, / var / spool, ...
Ndinovimba wakafarira hunyengeri uye ukaona zvichibatsira.
Mamwe mashoko - OpenSuSE 13.1: yeiyo Raspberry Pi
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Raspbery Pi: wedzera hupenyu hweiyo SD kadhi
Ungachinja sei iyo Grub kumashure muDebian
OpenSuSE 13.1 yeiyo Raspberry Pi